Kuqwashiswe abafundi nge ‘kuber’ nesnemfu | News24
Kuqwashiswe abafundi nge ‘kuber’ nesnemfu
Ngemuva kusukela kwesokunxele: Nonhlanhla Mazibuko, Mbali Ngcobo, Sr Nana Bonga, Sbongile Nene, Lotsho Magwaza no Lindeni Zungu bemi nabafundi besifazane base Sobantu Secondary School. ISITHOMBE:nokulunga ngobese
UKUVALA inyanga yabesifazane, inhlangano eqwashisa ngesifo somdlavuza iCancer Association of South Africa (Cansa) iqwashise abafundi bamantombazane baseSobantu Secondary School ngobubi bokusebenzisa izidakamizwa okungaholela ekutheni bazithole sebenesifo somdlavuza.
Le nhlangano ikusho lokhu emcimbini obuhlelwe iThembalabantu Children’s Foundation ngeledlule, ngenhloso yokwakha abesifazane abasebancane nokubacobelela ngolwazi. Phakathi kwezinhlangano ebezikhona kubalwa iCansa, iFamilies South Africa (Famsa) noMnyango wezeNhlalakahle ngaphansi kwamasipala uMsunduzi.
Eqwashisa abafundi uNkk Nana Bonga uthe: “Ngokwezibalo oyedwa kwabangu 33 abesifazane unomdlavuza webele ngakho kubalulekile ukuthi sishumayele ivangeli lokuzinakekela kwabesifazane abasebancane ukuze kwehle lesi sibalo.
“Ezinye izinto ezikhonzwe kakhulu intsha okubalwa kuzona izidakamizwa ezinjengesnemfu ne-kuber ziyawanyusa amathuba okuthi abesifazane bangenwe umdlavuza. Ezinye zazo lezi zidakamizwa zize zibhaliwe ukuthi zibanga umdlavuza kodwa abantu abasha bayaqhubeka nokuzisebenzisa.
“Enye yezinto ezinomthelela kakhulu ekutheni abantu abasha, ikakhulukazi abesifazane, bazithole sebenomdlavuza, ukusebenzisa amaphilisi okuvikela inzalo. Abanye baze bayawasebenzisa la maphilisi ukukhipha izisu okunobungozi obukhulu.
“La maphilisi aphazamisa ukusebenza kwamahomoni , okwenza babe nomfutho ophezulu wegazi (BP).”
UBonga uphinde wagqugquzela abafundi ukuthi kubalulekile ukuthi baphuthume emitholampilo nasezibhedlela uma kukhona abakusolayo, bangasukumi ngoba sekonakele.
Umsunguli wenhlangano iThembalabantu Children’ s Foundation uNksz Nonhlanhla Mazibuko uthe bakhethe ukuvala inyanga yabesifazane ngokuyala abesifazane abasebancane.
Uthe: “Isizulu siyasho ukuthi zibanjwa zisemaphuphuo, yingakho sikhethe ukuthi sikhulume namantombazanyana. Iskhathi esiningi uma kukhulunywa ngemigubho yabesifazane, kukancane lapho kugxilwa kumntwana wentombazane.
“Abesifazane abasebancane bangomama bakusasa, ngakho kubalulekile ukuthi siqale ukutshala imbewu besebancane,” kusho yena.
Abafundi baphinde baphiwa izipho ezahlukahlukene